Xakameynta xanuunnada xiidmaha
Waa maxay xakameynta xanuunnada xiidmaha?
Jeermiska qaarkiis si fudud ayuu hawa ahaan ugu sii gudbi karaa bukaannada kale. Xakameynta xanuunnada xiidmaha waa hab looga hortago in xanuun la isu gudbiyo.
Maxaa ilmahayga loogu daray xakameynta xanuunnada xiidmaha?
Sababta ilmahaaga loogu daray xakameynta xanuunnada xiidmaha waa xanuun uu qabo ama qabi karo. Xakameyntan waa sida lagu yareeyo fursadaha ay ku dhici karto in ilmaha kale uu wax jeermis ah u sii gudbo.
Meyr gacmahaaga intaadan soo gelin iyo intaadan ka bixin qolka ilmahaaga. Hubso in aad isticmaasho biyo iyo saabuun markaad qolka ka baxeyso. Iska hubso in ay dadka idin soo booqda iyaguna sidaas oo kale sameeyaan.
Markaad ilmahaaga daryeeleyso xiro gacmo-gelis iyo dharka isbitaalka haddii aad taaban doonto dareeraha jirkiisa (sida kaadida, dhareerka).
Looma oggolaan doono ilmahaagu inuu aado qolka ay carruurtu ku ciyaarto, taasoo ay ugu wacan tahay khatarta weyn ee faafinta jeermiska. Qolka ayaa alaabo uu ku ciyaaro loogu keeni doonaa ilmahaaga. Wax kasta oo ay ka mid yihiin qalabka, alaabta iyo ciyaaraha carruurta, waa in aan laga saarin qolka ilmahaaga ilaa ay nadiifiyaan shaqaalaha isbitaalka.